एक पैसाको मूल्य २ लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी ! | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalएक पैसाको मूल्य २ लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी !
Home अन्तर्राष्ट्रिय एक पैसाको मूल्य २ लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी !
एक पैसाको मूल्य २ लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी !
काठमाडौं : एक पैसाको मूल्य कति होला ? धेरैले सहजै उत्तर दिन्छन् एक पैसाको मूल्य एक पैसा नै । तर त्यसो होइन , अमेरिकाको बोस्टनबाट प्राप्त एक समाचारअनुसार एक पैसा अर्थात् एक पेनीको मूल्य २ लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी रहेको पाइएको छ । बोस्टनका एक व्यक्तिले आफ्नो खाजा खर्चमा भेटेको ७० वर्ष पूरानो एक पेनीलाई अर्का एक व्यक्तिले लिलाम बढाबढ गरी २ लाख ४ हजार डलरमा खरिद गरेका छन् ।
सो तामाको सिक्का नेपाली रुपैयाँ २ करोड २० लाखमा बिक्री गरिएको हो । बोस्टनमा बसोबास गर्दै आएका ६६ वर्षीय टम काल्डबेलले उक्त रकममा एक पेनी खरिद गरेका हुन् । लिलाम बढाबढमा ३० जना सहभागी भएका थिए । सन् १९४३ मा सो तामाको सिक्का बनाइएको दावी गरिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा अमेरिकाको संघीय सरकारले विश्वयुद्धका लागि तयार गरिएको तामाको सामगी बनाउँदा उक्त सिक्का समेत बनेको बताइन्छ ।
यस्ता मुद्रा २० वटा रहेका छन् । पुरातत्वको लिलाम बढाबढ गर्ने एक संस्थाकाअनुसार जोन लुटेस जुनियरले १६ वर्षको हुँदा स्कूलको चमेना गृहमा खाना खाँदा उक्त पैसा पाएका थिए । सोही प्रकारको पेनी सन् २०१० मा १ लाख ७० हजार डलरमा बिक्री भएको बताइएको छ ।
सरकारको कामबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन : नेकपा नेता पौडेल
२३ वाणिज्य बैंकले गरे लगानीकर्तालाई लाभांश दिने घोषणा, कुन बैंकको कति ?
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र नेता किम जोङ उनबीच आज पनि भेटवार्ता हुँदै
भारतीय वायु सेनाका दुई जहाज पाकिस्तानी सैनिकले विवादास्पद कस्मिरमा खसाले